BUULKABA BAKAYLAHA (HOOYADA BOQORADDA): QIYAASTA, SIDA LOO SAMEEYO GACMAHAAGA - XOOLAHA
Sidee loo sameeyaa boqor u ah ee bakayle leh gacmahooda
Carabta hooyada ayaa loogu baahan yahay taranta guurka ee guusha, iyo baahi loo qabo wakhtiga qaboobaha, laakiin sidoo kale xagaaga. Goobtaas oo ah meel bannaan oo kale ayaa ku takhasusay hab nololeedka dabiiciga ah ee bakaylaha, kuwaas oo ah burrows ay ku nuujiyaan carruurtooda. Dib u soo kabashada xaaladaha noocaas ah ee qafiska waxay u oggolaanayaan bakaylaha in ay si fiican u ilaaliyaan bakaylaha yar yar, iyo barafka si ay u koraan oo u caafimaad qabaan. Noocyada soo saarista iyo isticmaalka naqshadahan waxay tixgelin siin doonaan maqaalka.
Buulda qashinka: cabbirka iyo sifooyinka
Marka aad guriga joogtid, waxaad dib u furi kartaa godadka bakaylaha gacmahaaga adigoo sameysanaya sanduuq khaas ah oo leh dalool kaas oo buulku ku nuujin doono dabka. Samee sanduuq caynkaas ah ma aha mid adag oo aan qaali ahayn. Waa sanduuq kulul leh darbiyada fanka, furan sare ee nadiifinta sahlan iyo leh dalool wareeg ah dhinaca, taas oo ah daloolka miisaanka. Inkastoo xaqiiqda ah in bakaylaha ay ku yimaadaan qiyaaso kala duwan, hooyooyinka ayaa badanaa sameeya heerka. Cabbirada ballaaran ayaa lagama maarmaanka u ah haddii xayawaanka ay ka mid yihiin nuucyada waaweyn. Si kastaba ha ahaatee, inta badan wakiiladu waxay wajihi doonaan cabbirka heerka dhismaha.
Baro sida loo sameeyo qafis for bakaylaha, shed, barn, foosto, baaquli biyo, quudinta quudinta iyo a sennik.
Sanduuqa caadiga ah ee bakaylaha ayaa leh cabbiraha soo socda:
aagga hoose - 30x50 cm;
derbiyada hore iyo gadaasha - 30x50 cm;
derbiyada dhinaca - 30x35 cm;
dhererka derbiyada oo dhan - 30 cm;
dhexroorka godhka wareega ah - illaa 15 cm ilaa 18 cm.
Xulashada cabbirka boqoradda, waxaad u baahan tahay inaad ka bilawdo cabirka bakaylaha ee ku noolaan doona. Noocyada qurxinta uma baahna dhisme ballaaran, maadaama aysan si buuxda u fulin doonin ujeedadeedu. Buulka bakaylaha waxaa lagama maarmaanka u ah daloolo wareeg ah - foorno, kaas oo xayawaanku ku fuuli karo gudaha. Nidaji dhererka waxaa lagu sameeyaa dhinaca danbe ee darbiga hore ee sawir qaadaha, isaga oo ka soo baxaya derbiga dhinaca 1-2 cm. Dhismaha dhismaha waa laba jibbaar, oo leh lakab aad u fiican oo ah balka daboolka ah ee udhexeeya suunka: Tani waxay kuu saamaxeysaa inaad si firfircoon uga ilaaliso buulka. Ujeedadaas oo kale, lakabka qorraxda qallalan iyo diirimaadka ayaa lagu shubay hoose ee sanduuqa.
Waa muhiim! Haddii bakeylka la sugo gabar aad u da 'yar, markaas beeralaygu wuxuu u baahan yahay inuu ilaaliyo qashinka ku jira aalkolada hooyada. Laakiin bakteeriyada qaangaarka ah ayaa si madaxbannaan u qalabeeysa oo diiriya buulka geedi socodka mustaqbalka.
Si loo fududeeyo hawsha nadiifinta boqoradda, iyo sidoo kale inay bixiso fursad ay ku kontoroolaan bakaylaha, iyaga oo daawanaya iyaga oo aan dhibin, waxaad dabooli kartaa daboolka sare ee sanduuqa leh canopies, taas oo kuu oggolaan doonta inaad furto buulka bukaanka wakhti kasta oo laga saaro iyada oo aan guurin . Haddii bakaylaha ay aad u ballaaran yihiin oo buulkuna ka samaysan yahay ma ku haboon yahay gudaha qafis, ka dibna waxaa la samayn karaa si fudud iyadoo la sii wadayo qafis, iyada oo ay ku jirto qaybta dheeraadka ah ee dahaararka.
Doorashada qoryaha ee boqoradda, waa in aanad dooran in la furo: waxay leeyihiin ur adag oo saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo u badan tahay inay cabsigeliso miisaanka. Sidaa darted, iyadu waxay ka tagi kartaa buulkeedii, oo joojin guud ahaanba daryeelaya farcankiisa. Sida manjulka, waa inaadan meel u dhigin. Waa in maskaxda lagu hayo in kaliya ma aha dumarka qaangaarka ah oo kaliya ayaa ku xajin doona, laakiin sidoo kale bakaylaha yaryar, marka wakhtigu yimaado inuu ka tago buulkeedii.
Sida loo sameeyo naqshad gacmo gaar ah
Samaynta boodhka ee bakaylaha leh gacmahooda ayaa ah mid dhaqaale ahaan labadaba wakhtiga iyo marka la eego dadaalka iyo kharashka dhaqaale. Naqshadeynta, oo gacanta laga sameeyay, waxay leedahay tiro ka mid ah faa'iidooyinka ku saabsan isku dhejinta wax soo saarka, maadaama ay tahay calaamadda dhaqdhaqaaqa (soo-saareyaasha badiyaa waxay sameeyaan unugyada boqoradda ee horay loogu dhejiyay qafiska) waxayna u dhigantaa baahiyaha iyo xajmiga xayawaankaaga.
Ma taqaanaa? Khamrigu wuxuu awoodaa inuu uuraysto lix bilood oo ka mid ah nolosha, iyo sanadka dhexdiisa, haweenka, celcelis ahaan, waxay soo saaraan qiyaastii 30 qofood oo cusub. Rikoorka waa la ogyahay markii haweeneydu ay isla markiiba dhalisay 24 jibbaar.
Wixii saaran sanduuqa, kaas oo u adeegi doona sida buul a ee bakaylaha, waxaad u baahan doontaa qalabka soo socda:
xayeysiiska xayawaanka ilaa 5 mm qaro weyn, 2 pcs ah dhinac kasta - 4daab. oo leh cabbir ah 30x50 cm ee darbiyada hore iyo gadaasha; 4 gogo ' oo leh cabbir ah 35x50 cm xagga hoose iyo daboolka iyo 4 pcs. oo leh cabbir ah 30x35 cm derbiyada dhinaca;
xayndaabyada dhuxusha 2-2.5 cm qaro weyn;
kuraas alwaax ah ilaa 3 cm qaro weyn;
xakamaynta - laba yar ama mid weyn;
rinjiga qaabka dhirta.
Si aad uga sameysid buulashan qalabkaan, waxaad u baahan doontaa qalabka soo socda:
qiyaasta cajalad iyo qalin ama jees mindi lagu cabbiro iyo qorista;
muraayadaha iyo ciddiyaha ee dhismaha dhejinta;
ciriiriye ama dhejiyeeye.
Reiki, lagama maarmaanka u ah buulkeedii, oo aan daruuri ahayn in la iibsado - waxaa si madax bannaan looga sameyn karaa guddiyada ku habboon. Halkii laga heli lahaa jilbaha, waxaad isticmaali kartaa qori ama OSB. Laakiin rinjiga, waxaad qaadan kartaa wax kasta oo ku habboon oo ammaan ah, sida xumbo. Si kastaba ha noqotee, balka ayaa ah midka ugu jaban uguna wanaagsan bey'ada, iyada oo la ilaalinayo guryaha rinjirta fiican.
Ma taqaanaa? Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in hawsha ugu sarreysa ee bakaylaha ay ku dhacdo qorraxda ama qorraxda, xayawaankani waxa ay si fiican u jihaysan yihiin mugdiga. Sidaa darteed, bakaylaha yaryar uma baahna in ay iftiimiso buulka.
Samaynta buulkeed ee bakayle waxay ka bilaabataa diyaarinta sawirrada iyo jarida taangiga iyo geela iyaga oo u eegaya iyaga. Tallaabooyin dheeraad ah waa sidan soo socota:
Warqad kasta oo farshaxan waa in lagu calaamadiyaa wareega wareegga ciddiyaha. Tani waxaa lagu sameeyaa dhammaan qaybaha, marka laga reebo kuwa laba ah oo loogu talagalay manjada mustaqbalka. Xayawaanku waa inay si sax ah u dhigmaan dhererka xaashida xayawaanka ah waxayna ku habboon yihiin midba midka kale, haddii kale dhadku wuxuu toosi doonaa meeraha oo wuxuu noqon karaa mid halis u ah bakaylaha.
In qaabka soo baxay taasoo dhicin balka balka. Waxay u baahan yihiin inay si fiican u tufaan oo ay u seexdaan hurdo aad u adag. Haddii aad iska indhatirto qaanuunkan oo aanad ku cadaadin dhadhanka, ka dib marka hawlgalka ay dhuminayaan, taas oo si xun u saamayn doonta tayada rinjiga.
Ka dib markii qaboojiyadu ay ka buuxsamaan rinjiyeynta, waa inay kudoodaan xaashida labaad ee kumbuyuutarka dhinaca furan. Sidan oo kale, qaybo adag oo dhameystiran ayaa la helayaa.
Hadda waxaad samayn kartaa derbiga hore, kaas oo yeelan doona daloolka bakayle. Derbigan waxaa loo sameeyaa si ka duwan isla markaana waa xul qaran. Sidaa daraadeed, mid ka mid ah qaybaheeda, mid ka mid ah kaas oo daloolku noqon doono, waa inuu ka koobnaadaa guddoomiye kaas oo godka la gooyo, qaybta labaadna waxay ka samaysantaa gawaarida, oo ay la jilaan jilbaha iyo ka buuxshay dabayshu, sida inteeda kale dhismaha. Labada qaybood ee derbiga hore ayaa lagu dhejiyaa.
Laz waxaa laga jari karaa jigsaw, laakiin haddii aysan jirin, markaa hacksaw caadi ah ayaa ku habboon ujeedadaas. Intaa waxaa dheer, godka loogu talagalay bakayle qasab ma aha in ay wareegto, haddii tani aysan shaqayn. Waxaad yareyn kartaa godka duuban oo leh khariidad dhinaca derbiga ah. Waxa ugu muhiimsan waa in ay ahaato cabbirka noocan oo kale ah in bakeylku uu ku kicin karo iyada oo kuleylku aanu ka tegin booska boqoradda si ka dhakhso badan.
Dhammaan qaybaha la dhammeeyaa waa la isku duubay oo lagu dhejiyaa ciddiyaha ama muraayadaha si ay sanduuqa u helaan, laakiin daboolka weli lama lifaaqin.
Waxaa habboon in la daboolo daboolka, sidaas awgeed isticmaalida muraayadaha si aad ugu dhejisid cidhifyada ilaa geeska sare ee derbiga gadaashiisa, taas oo ay qaybta ka dhigaan.
Caanaha hooyadu soo saarto sida waafaqsan tilmaamahan badiyaa waa doorasho xagaaga waxaana loo isticmaalaa xilliga diiran. Badanaa ma jirto baahi loo qabo in buulka laga kululeeyo, taniyo xilliga qaboobaha, bakaylaha marar dhif ah ayay soo saaraan caruur. Hase yeeshee, tani weli way dhacdaa, markaa waxaa jira baahi loo qabo in laga qaybgalo kulannada kuleyliyaha dhismaha. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa kululeeyaha korantada gaarka ah ee unugyada boqoradda.
Cabbirkiisu wuxuu u eg yahay cabbirka gudaha gudaha sanduuqa. Waa ku filan in la geliyo sariirta sida sariirta hoose ee sanduuqa, ku dabool dharka iyo daboolka cawska: bakaylaha waxay dareemayaan raaxo dabaqa diiran. Waxaa suurtagal ah in la gashado sariirta kuleylka sida loo baahdo. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa hababka casriga ah ee kuleylka - tusaale ahaan, si aad u sameysid dabacsan oo leh filim leh qalab kuleyl ah oo lagu dhejiyay qalabka lagu rakibo hoostiisa.
Waa muhiim! Si aaney u weyneynin bakaylaha, cabirka hooyada waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo awooda ugu yar ee qalabka kuleylka, waana inay ahaataa inta u dhexeysa 100 W ilaa 150 W halkii mitir labajibbaaran. mitir
Slats ilaa 2 cm qaro weyn ayaa lagu rakibay hareeraha wareegga, korka sare ee sanduuqa la dhigo. Sidaa darteed, barkin hawo kulul ayaa soo kacaysa inta u dhexeysa filimka iyo hoose ee khamriga hooyada. Waa suurtogal in la diiriyo buulka dabiiciga ah ee loogu talagalay jiilaalka iyada oo aan la isticmaalin qalabka korontada korontada. Si taas loo sameeyo, waa ku filan in la dhigo dibedda sanduuqa leh xaashida xumbo, iyo gudaha gudaha sariirta kuleylka ama dhalada biyo kulul. Inkasta oo habkani yahay mid gebi ahaanba badbaado u leh bakaylaha, waa mid dhib badan, maadaama ay lagama maarmaan tahay in si joogto ah loola socdo heerkulka biyaha ee heesaha iyo si joogto ah u bedelaan. Haddii ay jiraan bakaylo badan, markaa habkani ma aha wax faa'iido leh. Caanaha hooyada ee xilliga jiilaalka waa in lagu qalabeeyaa heerkulbeeg ama kululeeyaha korantada oo leh heerkulbeegga tooska ah, sababtoo ah kuleylka ayaa aad ugu xun labada bakaylaha iyo caruurta.
Isticmaalida buulka aabaha ee bakaylaha
Unugyada boqoradda ayaa lagu rakibay qafis leh bakayli uur leh ilaa 5 cisho kahor intaan loo baahnayn - waa lagama maarmaan inay dhisato buulkeedii sanduuqa. Bakeyle wuxuu hoos u dhigaa caws, iyo sidoo kale jarista dharka uu u gaar ah, kaas oo uu ka soo baxayo laabtiisa iyo caloosha. Xaqiiqda ah in dhalmada ay dhawaan noqon doonto, waxaa lagu fahmi karaa dhaqanka haweeneyda - waxay noqotaa mid dagaal badan oo aan degeneyn, rushes ku hareereysan qafiska, waxay isku dayaysaa isku dayga diyaarinta buulka. Kahor-qabashada boqoradda waxay u oggolaanaysaa xayawaanku in ay u isticmaalaan, si ay u gabbadaan, iyo haddii ay gabadhu ka heshay sanduuqa mid deggan oo ammaan ah, ka dibna waxay ka bilaabi doontaa buulka. Inkastoo mararka qaarkood gabdhaha dhallinyarada ah ay bilaabi karaan inay jiidaan qashinka buulka ka dib qaansada. Xaaladdan, waxaad marka hore caawin kartaa hooyada aan taqasusneyn iyo qayb ahaan naftaada buugta. Si bakayleedu u diido in boqoradda loo diido, waa inaysan ku jirin urta qallafsan, waa inay noqotaa mid qallalan oo kulul, oo la ilaaliyo oo raaxo leh. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan baahi degdeg ah loo baahnayn, muhiim ma aha in kor loo qaado buulka, oo inta badan fiiri daboolka furan, haddii kale haweenku waxay dareemayaan raaxo la'aan waxayna diidi karaan sanduuqa. Iftiiminta dheeraadka ah lagama maarmaan maaha: bakaylaha waxay ku fiicanyihiin mugdiga, iyo bakaylaha waxay ku dhasheen burrows mugdi ah marka hore uma baahna iftiin.
Waa muhiim! Waayeelka waaweyni waxay dareemaan raaxo leh 0. Iyo heerkulka joogtada ah, kaas oo aan hoos hoos u dhigin calaamadda + 10 nool, xayawaanka ayaa si fiican u miisaamaya oo dareemaya wanaag. Si kastaba ha ahaatee, ilmaha dhasha ah waxay ubaahan yahiin heerkul sare, taas oo u dhaxaysa + 26 + iyo + 28.
Khamriga waa hooyooyinka mas'uulka ka ah, sidaa daraaddeed waxay daryeelaan ilamaha naftoodana badanaa uma baahna wax faragelin dheeraad ah oo aadanaha ah. In kastoo bakaylaha sida caadiga ah aan ku dhalan jiilaalka sababtoo ah cimilada qabow, laakiin guriga, marka xayawaanku ilaaliyaan heerkul diirran, waxaan filan karnaa buuxinta markasta.
Sidaa darteed, xilliga jiilaalka, unugyada boqoradda kululeeyo ayaa lagama maarmaan ah, laakiin nidaamka kuleylka ah ee iyaga ku jira waa in la xakameeyo si uusan bakaylku u kulmin. Xilliga diiran ee kuleylka ee sanduuqa ayaan loo baahneyn. Nadiifinta waa in si joogto ah loo sameeyaa buulka.
Kusoo dhawow jaangooyooyinka jiilaalka ku wareegsan wadada wadada.
Qashin ayaa loo baahan yahay in la baddalo marka la helo wasakh iyo si looga hortago raasamaalka qoyaanka iyo hooseeynta qoryaha hoose ee sanduuqa, haddii kale kontoroolka ayaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu ku jimciyo, kaas oo jebin doona sifooyinka kuleylka kuleylka dhismaha wuxuuna noqonayaa ilaha dhalidda bakteeriyada jiran. Looma baahna inaad riixdo bakaylaha inay ka baxdo aalkolada hooyada. 20ka maalmood ee ugu horreeya ee bakaylaha ayaa la joogi doona buulka, laakiin markaa iyo caruurtu waxay si madaxbannaan uga tagi doonaan nooca "god" oo soo baxaya. Cabbirka boqoradda waa muhiim in bakeylka, sababtoo ah sanduuq aad u yaryar ah ayaa noqon doona mid aan raaxo lahayn, waxayna u muuqan doontaa in ay aad u weyn tahay qafis kale waxayna ku jiri doontaa halkaa. Hase yeeshee, buunshaha yaryar waxa uu nafsaddiisa ku yareyn doonaa buulka. Sidaa darteed, si aad u ilaaliso hoose ee tufaax ka soo laalaabtay kaadinta sababo kaadida iyo soo jiidashada, waxaa suurtagal ah in la dhigo qaybaha galvanized ee hoose. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad taxaddar sameyso xilliga jiilaalka, maxaa yeelay birtu waxay leedahay kuleyliye kuleylkiisu sarreeyo, taas oo ah sababta heerkulka aalkolada uu si weyn hoos ugu dhaco.
Waxaad isku ilaalin kartaa naftaada adigoo saaraya lakab kale oo cows ah ugu yaraan 20 cm oo ka sareeya xaashiyadaha Marka aad qalabeysan tahay qalabka kuleylka, waxaad u baahan tahay inaad ka walwashid go'doominta dhamaystiran ee dhammaan walxaha laga helo helitaanka bakaylaha. Fiilooyinka waa in laga soo saaraa qafiska, haddii kale bakaylaha ayaa u muuqda in la googoynayo, dhammaan qaybaha kululeeyayaasha waa in laga ilaaliyaa qoyaanka, kaadida iyo xayawaanka xoolaha, haddii kale kiis ka soo horjeeda waxay keeni kartaa gaaban gaaban iyo dab.
Ma taqaanaa? Bakteeriyada bunni waxay isku mar noqon kartaa laba litters oo ka duwan ragga iyo kala duwan waqtiyo kala duwan. Tani waa suurtogal maadaama dumarka xayawaankani ay leeyihiin ilmo-galeenka kala-guurka.
Maaraynta Hooyo - naqshad fudud oo jaban si aad naftaada u sameyso. Waxaa laga sameeyaa alaabta kaydka ah, ficil ahaan uma baahna dhaqaale iyo waqti qarashka, iyo xayawaanka ay u adeegto hoy la isku haleyn karo, waxay siisaa dareen amaan ah, jiilaalkana wuxuu u adeegaa sidii kulaylka loo baahanyahay uuna u baahnayn kareyashii bakayle.
Video: DIY lacag